I-china L-valine CAS 72-18-4 Yebanga Lokudla (i-AJI USP) abakhiqizi nabaphakeli | Honray
I-L-Valine (i-Val esifushanisiwe) ingenye yama-amino acid ayi-18, futhi ingenye yama-amino acid ayisishiyagalombili abalulekile emzimbeni womuntu. Ibizwa ngokuthi yi-branched chain amino acid (BCAA) ene-L-Leucine ne-L-Isoleucine ndawonye ngoba onke aqukethe uchungechunge lwehlangothini lwe-methyl esakhiweni sawo samangqamuzana.
I-L-Valine ingenye yama-aliphatic amino acid phakathi kwezinhlobo ezingamashumi amabili zama-amino acid we-proteinogenic kanye ne-branched-chain amino acid (BCAA) isilwane ngokwaso esingakwazi ukuyihlanganisa futhi kufanele singene kokudla ukuze sihlangabezane nezidingo zaso zokudla okunempilo; ngakho-ke i-L-valine iyi-amino acid ebalulekile. Imiphumela eyinhloko njengokulandelayo:
(1) Kungezwe ekudleni kokuncelisa uketshezi okwenyusa isivuno sobisi. Umshini wukuthi i-L-Valine ingathinta ukukhiqizwa kwe-alanine nokudedelwa kwemisipha, kanti i-alanine entsha etholwe ku-lactations 'plasma kwesokudla isiza izicubu zamabele ukuzivumelanisa nesidingo sezinto zokusetshenziswa zikashukela futhi ngaleyo ndlela kukhiqizwe ubisi.
(2) Ukwenza ngcono ukusebenza komzimba kwezilwane. I-L-Valine ingashukumisa amathambo ezilwane amaseli we-T ukuthi aguqulwe abe ngamaseli we-T avuthiwe. Ukushoda kwe-valine kunciphisa isengezo se-C3 namazinga we-transferritin, okuvimbela kakhulu ukukhula kwe-thymus nezicubu zomzimba ze-lymphoid futhi kubangele ukukhula kokuvinjelwa kwamaseli egazi amhlophe ane-asidi futhi angathathi hlangothi. Uma eshodelwa i-valine, amatshwele angahamba kancane futhi angaphenduli ama-antibody egciwane lesifo i-Newcastle.
(3) Ukuthinta amazinga e-endocrine ezilwane. Ucwaningo lukhombisile ukuthi ukuhlwanyela izingulube ezincelisayo nokudla kwamagundane ancelisayo okwengezwe nge-L-valine kungakhuphula ukugxila kwe-prolactin ne-hormone yokukhula kuma-plasmas abo.
(4) I-valine ye-L nayo ibalulekile ngezinhloso zokulungiswa kwezicubu nokubuyiselwa. Ibizwa nge-amino acid noma i-BCAA eboshwe ngegatsha, esebenza kanye nama-BCAA amabili engeziwe aziwa njenge-L-Leucine ne-L-Isoleucine.
Langaphambilini I-L-Tryptophan CAS 73-22-3 yePharma Ibanga (USP)
Olandelayo: I-L-Leucine CAS 61-90-5 YeBanga Lokudla (AJI USP)
I-L-Threonine CAS 72-19-5 yeBanga Lokudla (FCC / AJI / ...
L-Isoleucine CAS 73-32-5 YeBanga Lokudla (AJI USP ...
I-L-Lysine HCL CAS 657-27-2 yeZinga Lokudla (FCC / AJ ...
L-Valine 72-18-4, L-Threonine Pharm Ibanga, Ukudla Kwezilwane, 73-32-5 L-Isoleucine, I-Pharm Grade L-Leucine, L-Threonine Ibanga Lokudla,